Ọkụ ọkụ maka Osisi
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ ubi na onye ọrụ ugbo mara na otu n'ime ihe ndị bụ isi maka mmepe na mmepe nke osisi bụ ìhè. Ihe a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ajụjụ nke na-eto eto na greenhouses , seedlings na ogige n'oge mgbe ìhè ụbọchị ka dị mkpụmkpụ. N'okwu ndị a, jiri isi mmalite ọkụ (oriọna phyto). Ma, dị ka usoro, usoro a dị oke ọnụ, ìhè nke oriọna ndị ahụ nwere ike ọ gaghị egbo mkpa nke ịkụ mkpụrụ. Isiokwu a ga-atụle nkà na ụzụ ọhụrụ maka ọkụ ọkụ na osisi oriọna.
Uru karịa analogues
Ọ na-amalite site na eziokwu na bọlbụ nkịtị sitere na phyto-oriọna dị iche site n'eziokwu ahụ bụ na a na-emegharị "mmụba" nke ọkụ azụ maka mkpa nke osisi ahụ. N'ezie, oriọna dị otú a na-eṅomi ìhè anyanwụ gbasasịrị, nke dị mkpa maka osisi. Osisi maka osisi nke ụdị Ụdị nwere ụdị mgbaaka ndị ahụ dị ka ọkpụkpụ na-emebu, mana ha na-eji ihe ọkụkụ eletrik karị. Ụdị ọkụ a dị irè karị, n'ihi na na-enwunye ọkụrị, enwerekwa ogwe aka ma ọ bụ teepu, nke dị mfe maka osisi na-eto eto. Enwere ike idowe ha na okpokoro nke griin ha ma obu ulo ozo ebe enwere eto. Ojiji nke okpukpuchi LED nke na-eto eto na-enye gị ohere ịmepụta ọtụtụ ụlọ-tiered owuwu, n'ihi na opekempe kachasị mma maka ihe ndị dị otú ahụ bụ nanị 30 centimeters. A na-eji ojiji red LED for the plant, ma maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ n'ime ihe ọkụkụ (Mercury adịghị adị);
Ogo nke ọkụ a na-ebupụta na-adịchaghị ala (ọkụ ọkụ ultraviolet na-adịghị):
Ọkụ ọkụ ọkụ maka osisi na-agba abụọ dịka 660 nm (ọbara uhie) na 460 nm (acha anụnụ anụnụ), ndị a bụ ebili mmiri nke na-etinye aka na osisi site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%:
Osisi onwe ha dị mfe, dị mfe iji wụnye ha, ha nwere usoro njikọ njikọta (ị nwere ike ịgbatị ma belata oghere ọkụ).
Taa, oriọna ọkụ na-eto eto, ma ọ bụrụ na ọ bụghị kpamkpam edochi ya, mgbe ahụ, ha nwere mmasị na ndị agrarian na ezinụlọ. A na-ejikarị ọkụ na-emepụta ụdị nke a na veranda nke ụlọ, ha na-agbanwezi ime ụlọ nke oge oyi n'ubi ndị mmadụ. Ọtụtụ na-eji raamị ọkụ na-eme ka ha nwee ike ịgbakwunye isi iyi ọkụ dị na windowsills. N'adịghị ka ọkọlọtọ, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ nwere ọtụtụ akụkụ karịa. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe, eletrikiiki na-ele anya na-eme ka obi dịkwuo ụtọ karịa ikpo ọkụ.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere iji ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ n'ugbo, mgbe ahụ, ihe kpatara ya ji dị oke karịa. Mgbe ị na-eji ọkụ eletrik, ọkụ eletrik na-ebelata 60-75%. Ọ dị mma ịbawanye nchekwa nchekwa ọkụ nke ogige ahụ. Enweghị mkpa ịwụnye sinks ọkụ (mgbe ị na-eji oriọna ndị a na-agbanye ọkụ, a na-eme ka okpomọkụ dị ọkụ). Ndụ ndụ nke ọkụ ọkụ ọkụ dị ọtụtụ ugboro karịa ihe ọ bụla analogues.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, ihe kpatara ịgbanwe ụlọ gị phytolamp ka ọkụ ọkụ ọkụ karịrị oke. Site na ngbanwe dị otú ahụ, naanị uru na nchekwa. Ị ga-achọpụta site n'aka onye ọkachamara nke ọkụ eletrik kacha mma maka osisi gị. Ọkụ ọkụ ọkụ bụ nkà na ụzụ nke ọdịnihu nke a pụrụ iji taa!
Kedu ka esi eto osisi?
Actinidia - kụrụ ma lekọta
Statica - na-eto site na mkpụrụ
Hydroponics - nsogbu na uru
Spiraea - nkwadebe maka oyi
Osisi Apple - kụrụ na ilekọta
Mgbe ị na-anakọta mkpụrụ osisi yabasị?
Gịnị ka parthenocarpic pụtara?
Osisi Apple Melba - àgwà nke iche iche, peculiarities nke ịgha mkpụrụ ma na-elekọta
Ịgha mkpụrụ strawberries - ihe ndabere nke owuwe ihe ubi bara ụba
Nri ihe ndozi
A na-eji aka aka ejiri aka mee ihe
Nri anụ anaghị eri anụ
Bulgur - Ezi ntụziaka
Kedu ka esi edozi nri nri agwakọta?
Gini mere umu nwanyi di ime na-aga ije n'ukwu ha?
Gordon Ramzi: "Ochioma m ekwesighi imere umu m!"
Kedu uru nke apụl dị na oven?
Nkume ọla edo na ụkwụ
Uwe mgbede 2018 - nhọrọ nke foto nke uwe ejiji kacha mma nke oge ọhụrụ
Ncha ọcha na mbọ
Jacqueline Murdoch n'oge ọ bụ nwata nakwa ugbu a
25 Nri Ezi Kuki Krismas
Culu ntụ ntụ dị mma na ihe ọjọọ
Nwa na-atụ ụjọ
Kedu ka esi eme okenye?
Chicken obi na utoojoo ihe ọṅụṅụ ihendori
Ihe mmega ahụ maka elasticity of thetocks